Angony ny VOC (feon'ny mpanjifa) hahazoana ny andrasan'ny mpanjifa avy eo ampiharo ny QFD (fivoarana ny kalitaon'ny kalitao) hamantarana ireo fiasa lehibe, hanome aingam-panahy ny hevitra hamafana azy io, hamaranana ny fivoaran'ny hevitra amin'ny fanatsarana ny hevitra. Mandritra izany fotoana izany ny maodely 3D dia manana fandalinana FMEA sy DFM. Makà fitaovana EPS mazava tsara sy fitaovana fananganana banga amin'ny alàlan'ny fitaovana mandroso ao anatin'izany ny famokarana herinaratra tariby sy ny fanapahana CNC.
Mamorona sarintany misy fiantraikany arakaraka ny fenitra misy azy, ny valin'ny lasitra ao anaty haavo voafaritra, ampiasao fitaovana fitsapana Cadex voadinika mba hanaovana fitsapana ao an-trano amin'ny teknika laboratoara mahay. Hamarino ny maodely tsirairay amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana malaza. laboratoara
Manaova fampianarana miasa sy SOP (fomba fiasa mahazatra) miaraka amin'ny fandeferana amin'ny famokarana voafaritra. Manaova drafitra fanaraha-maso Process mba hahazoana antoka kalitao avo lenta. Alao sary an-tsaina ny dingana lehibe amin'ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny scrum board, araho akaiky ny fivoarana amin'ny alàlan'ny fampiasana lisitra OKR, fivoriana fijoroana isan'andro ary ny fandaharam-potoanan'ny tabilao Gantt.
Ataovy varotra ara-potoana ny tetikasa tsirairay amin'ny vidiny avo lenta.
Izahay dia mifantoka foana amin'ny fikarohana vaovao tsy amin'ny fizotran'ny fanamboarana mandroso ihany fa amin'ny fitaovana sy ny teknolojia vaovao koa, amin'ny lafiny faritra, namolavola ampahany silônaly namboarina tamina padding malefaka izahay mba handraisan'ny slipper angovo mandritra ny fianjerana ary hiarovana ny loha tsy hisy vokany ny silika dia tsy misy vokany eo amin'ny aina ary mitazona ny fampangatsiahana mandritra ny dia.
Ny biomaterial dia ny anjarantsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, nanjary teny mafana ho an'ny faharetana, nanamboatra biomaterial marobe (toy ny bakteria, volotsangana ary fitaovana fanodinana) hampihenana ny fampiasana solika fôsily.
Padding vita amin'ny silipo.
Fitaovana fiasa avo lenta.
Miaro amin'ny mikraoba sy ny fofona.
Maharitra sy mahazo aina.
Mijanona maina sy odro maimaim-poana.
Fifanarahana tsy misy fangarony TPU.
Fampiraisana tsy misy tohana.
Firafitra avo lenta.
Fanamafisana PC / PP.
0.25mm - fametahana PC manify 0,5mm sakafo hariva.
Famolavolana landy ahazoana aina.
Ny fihenan'ny asa dia manampy amin'ny fampihenana ny angovo misy fiantraikany.
Webbing tenona volamena
3D webbing effet
Webbing vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy
Webbing polyester azo averina
Webbing misy taratra